movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း) | maungpeace
Category Archives: movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)
click here to read in pdf တရုတ်ပြည်ကြီး တိုးတက်တယ် ဆိုတာ တကယ်လား။ မြို့ကြီးတွေ မှာ စက်ရုံတွေ၊ တိုးတက်မှုတွေ သွားစု နေသလား။ တောင်တန်းတွေထဲ က ရွာလေး တစ်ရွာမှာ ဘက်စ်ကားခ တရုတ်ငွေ ၂၀ ယွမ် (၃ ဒေါ်လာ ကျော်ကျော်၊ မြန်မာငွေ ၂၄၀၀ ကျော်ကျော်) မတတ်နိုင်လို့ မြို့ကို လမ်းလျှောက်တဲ့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် မူလတန်းပြ ဆရာမ တစ်ယောက် ကို ကြည့်ချင်ပါသလား။ … Continue reading →
Reflection on “The Notebook”
Posted on February 14, 2013	by maungpeace
(spoiler alert, if you haven’t watch the movie, you should not read my review. Because I am going to share what I think the hero and heroine should do in the real life.) That was my second times watching “the … Continue reading →
Posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)	| Tagged love, real life, romance, Valentines	| Leaveacomment
အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆု မရဘဲ ပထမဆု ရသွားလို့ ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားတဲ့ အလီ ဆိုတဲ့ ခလေး ရဲ့ မျက်နှာ ဟာ သနားဖို့လည်းကောင်း၊ ဟားတိုက်ဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်နှယ့် ဒီကောင့်နှယ် ပထမ ရလို့ ဝမ်းနည်းရသတုန်း ဆိုတော့ တတိယ ဆု က သူ လိုချင်တဲ့ ကျနော်တော့ ဝေါ့ကင်းရူး (walking shoe) လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီမှာတော့ (Sneaker) လို့ခေါ်တဲ့ ဘိုဖိနပ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းက အီရန်က ဖိနပ်ပျောက်သွားတဲ့ … Continue reading →
Posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)	| Tagged children, Iran, Islam	| 1 Comment
“Close to Home” isafilm about two Israeli female soldiers and their time in the military service. This movie is interesting if you have prior knowledge about Israel and its situation. If not the film is boring because it … Continue reading →
Posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)	| Tagged Arab, Isarel, Palestine, security, soldier	| Leaveacomment
ဟောလီးဝုဒ် က ရိုက်တာ မဟုတ်တဲ့ ရုပ်ရှင် ထဲမှာ ဒီ ရုပ်ရှင် က တော်တော် ကို ကောင်းတယ်။ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကား အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘာအကြောင်းကို ရိုက်ထားတာလဲ ဆိုတော့ နီပေါ နိုင်ငံ နယ်စပ်၊ တိဗက် နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ တောင်တန်းတွေ ပေါ်မှာ နေတဲ့ ဒိုပို (Dolpo) လူမျိုးစု အကြောင်းကို ရိုက်ပြထားလို့ပါ။ ဒီအတိုင်း ဒီလူတွေက ဆားကုန်ကူးတယ်။ ပေ ၁၃၀၀၀ ကနေ … Continue reading →
Posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)	| Tagged life, Nepal, Tibet	|2Comments
အခုတလော နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် အားနေတာရယ်၊ ရခိုင်က လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေ ကြောင့် ကမ္ဘာ့ သမိုင်းမှာ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်ဆုံးဖြစ်ရပ်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ နာဇီဂျာမနီ အကြောင်း ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ ချည်းရွေးကြည့်နေပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူတွေ ဘယ်လို တွေးပီး ဘာအကြောင်းတွေ ကြောင့် ဒီလို လူမျိုးပြုန်း သတ်ဖြတ်မှု ကို ကျုးလွန်ပါလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှာနေမိပါတယ်။ ကျနော် လို အမျိုးသားရေး ကို ဦးစားမပေးတဲ့ လူ နဲ့ အမျိုးသားရေး … Continue reading →
Posted in movies review (ရုပ်ရှင် ရည်ညွှန်း)	| Tagged movies, Nazis, women	| Leaveacomment